Horudhaca kulanka ay kooxda Manchester United caawa booqanayso Partizan Belgrade ee Europa League – Gool FM
Horudhaca kulanka ay kooxda Manchester United caawa booqanayso Partizan Belgrade ee Europa League
(Belgrade ) 24 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kulan ka tirsan Europa League waxa ay caawa booqanaysaa naadiga reer Serbia ee Partizan Belgrade.
Kooxda reer England ee Manchester United iyo naadiga reer Serbia ee Partizan Belgrade ayaa caawa kooxdii adkaata waxa ay hoggaanka u qaban doontaa Guruubka I oo ay ku wada jiraan, maadaama ay haatan wada leeyihiin min afar dhibcood tartanka Europa League.
Labadan kooxood ayaa soo helay min hal guul iyo min hal barbaro labadii kulan oo ay horay u soo ciyaareen haatanna iyagaa isku dheggan, kooxdii badisa ayaana fariisan doonta fikta sare ee Guruubkan I, haddii ay barbaro galaanna waa ay isla wada hoggaamin doonaan Guruubkooda Europa League, iyagoo wadaagaya min shan dhibcood.
Taariikhda: Khamiis, 24 Okt 2019
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 7:55 Fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: Partizan Stadium
Xiddiga kooxda Partizan Belgrade ee Zoran Tosic kaasoo 12 bilood ku soo qaatay Manchester United ayaa ka hortagi doona caawa kooxdiisii hore.
Bibras Natkho oo hore ula soo ciyaaray United hadda ka hor ayaa shaqo fiican ka qabtay booskiisa, markii ugu dambeysay waa uu ka maqnaa Europa League, waana in doorkaas markale lagu siiyo halkan.
Faloobkii hore ee kooxda Liverpool Lazar Markovic ayaa dhaawac ku seegi doona kulankan ay kooxdiisu caawa garoonkeeda ku soo dhaweynayso Naadiga Man Utd.
Dhinaca kale Manchester United wararkeeda haddii aynu eegno, Axel Tuanzebe kaasoo dhaawac uu soo gaaray ka hor iskululeyntii ay kooxdiisu sameynaysay kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen Liverpool Axaddii ayaa seegi doona kulankan.
Anthony Martial ayaa dhaawac ka soo laabtay, waxaana uu soo galay qeybtii labaad kulankii kooxdiisu ay la dheeshay Liverpool ayaa ku soo bilaaban kara safka hore ee Man United kulanka caawa.
Paul Pogba ayaa ka maqnaanaya kulankan kooxdiisa Red Devils, isagoo aan ula safrin dalka Serbia, laakiin Phil Jones oo dhaawac ka soo laabtay ayaa kulankan ka soo muuqan kara.
Luke Shaw iyo Nemanja Matic ayaa isbuucan ku qaadanaya Magaalada Abu Dubai, waxaana ay tababar ku soo qaadanayaan cimillada kulul ee halkaasi si ay uga soo kabsadaan dhaawacyo ay la maqan yihiin, maqnaashaha Shaw ayaana ka dhigi karta in Brandon Williams uu ku soo bilowdo garabka bidix ee daafaca haddii uu doono macallin Ole.
Goolhaye David de Gea kaasoo dhaawac ka soo kabsaday kana soo muuqday kulankii ay barbaraha la galeen Liverpool ayaan ka soo muuqan doonin kulankan, isagoo aan tababarka la qaadan kooxdiisa Man Utd Arbacadii shalay taasoo ka dhigtay inuusan safarka kooxdiisa ka qeyb qaadan, waxaana kulanka caawa ku soo bilaaban doona goolhaye Sergio Romero.
Jesse Lingard oo tababarka kooxdiisa dib ugu soo laabtay kaddib dhaawac muruqa ah oo uu la maqnaa ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo kulankan, inkastoo uu ku soo bilaaban karo kursiga keydka.
>- Man Utd ayaan la garaacin ama laga adkaanin 13-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay UEFA Europa League.
>- Manchester United ayaa laga dhaliyey 2.5 goolal ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka UEFA Europa League.
>- Kooxda Manchester United ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyartay tartanka UEFA Europa League.